Ciidamada Danab Iyo Daraawiishta Oo Howlgal ka Fuliyay Deegaano ku Dhaw Jamaame.(Sawirro) -
Ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab oo ay wehliyeen ciidamo katirsan Daraawiishta Jubbaland ayaa maanta howlgal qorsheesan waxa ay ka sameeyay deegaano ay maamulaan dagaalyahanada Al Shabaab.
Telefishinka maamulka Jubbaland ayaa baahiyay in ciidamada huwanta ah ay howlgal ka sameeyeen deegaano ku dhaw dhaw degmada Jamaame halkaas oo gacanta ay ku hayeen dagaalyahanada Al Shabaab.
Mid kamid ah Saraakiisha ciidanka hogaamineysa ayaa sheegay in hawlgalkan uu wali socdo, waxa uuna cadeeyay in howlgalka sii wadayaan ilaa laga sifeynayo Al-Shabaab guud ahaan deegaanada webiga Jubba ku teetsan.
Waxa uu sheegay sargalkan in howlgalka ciidanka sameeyeen Al Shabaab lagu gaarsiiyay qasaaro kala duwan, waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada wadooyinka qaar kasoo saareen miinooyin lagu aasay.
Howlgalkan ay sameeyeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kumaandooska Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili maanta Al Shabaab weeraro xoogan ku qaadeen saldhigyo ciidanka dowlada ku leeyihiin gobolada Shabeelaha Hoose iyo Jubadda Hoose.